Ukwamkelwa kwe-University University yaseAustin Peay: UMTHETHO, Mkele umlinganiselo
I-Austin Peay State University Admissions Overview:
Abafundi kufuneka bahambise amanqaku ukusuka kwi-SAT okanye UMTHETHO njengenxalenye yesicelo sabo; Ingxenye ebhaliweyo yoviwo zombini ayifuni. Abafundi mabazithumele iincwadi eziphezulu zezikolo baze bazalise isicelo se-intanethi. Akukho ncoko okanye isitatimenti somntu siqu njengenxalenye yale sicelo. Kukho umrhumo omncinci (i-dollar-dollar) yesicelo.
Abafundi abanamabanga amabakala kunye namanqaku afanelekileyo okuvavanya banesibalo esihle sokwamkelwa kwi-State yase-Austin Peay-isikolo sinamkeleko okwamkela abantu abangama-89%.
I-Austin Peay I-State University Acceptance Rate: 89%
SAT Ukufunda okubalulekileyo: 470/561
ISAT Math: 463/563
I-Austin Peay IYunivesithi yeNkcazo yeNkcazelo:
Eyasungulwa ngowe-1927, iYunivesithi yase-Austin Peay yiprayuniyari kawonkewonke ene-169-acre campus ehlala eC Clarksville, eTennessee. Isikolo sithiwa ngumbusi waseTennessee wangaphambili, izakhiwo ezininzi zibizwa ngokuba ngabalawuli, kwaye i-mascot yunivesithi iyinkundla.
Abafundi base-Austin Peay bangakhetha ukusuka kwiiprogram ze-Bachelor degree degree; ishishini liyakuthandwa kakhulu ngabafundi bokuqala. Iyunivesithi iye yanda ngokukhawuleza kwiminyaka yamuva, kwaye isikolo sizuza amanqaku aphezulu ekukhuseleni i-campus, inkqubo yeROTC kunye neenkqubo zemidlalo. Ngaphambili kwezemidlalo, abalawuli be-Austin Peay bancintisana kwiCandelo le-NCAA I-Conference Valley yase-Ohio.
Imidlalo edumile ibandakanya ibhola yebhoksi, ibhola le-softball, ibhola lebhola, ibhola lebala kunye nomzila kunye nensimu.
Ubhaliso lwabonke: 10,344 (i-9,513 izifundo zakudala)
Isifundo kunye neMali: i-$ 7,689 (kwi-state); $ 22,929 (ngaphandle kwe-state)
Iincwadi: $ 1,550 ( kutheni uninzi? )
Igumbi neBhodi: $ 9,711
Ezinye iindleko: $ 4,538
Iindleko ezipheleleyo: i-$ 23,488 (kwi-state); $ 38,728 (ngaphandle kwe-state)
U-Austin Peay IYunivesithi yeNyuvesi yezeMali (2015 - 16):
Izibonelelo: $ 8,263
Imali: $ 5,405
I-Popular Majors: I- Biology, iBusiness, Izifundo zoNxibelelwano, ubulungisa boLwaphulo-mthetho, iMpilo, izifundo zoMgaqo-nkqubo, iNzululwazi yezopolitiko, i-Psychology, i-Social Work
Ireyithi yokuQinyezelwa koNyaka-4: 18%
Imidlalo Yabantu: Ibhola, iBhola lebhola, iBhola, iGalofu, Umkhondo kunye neNdawo, Izwe eliphambeneyo, iTennis
Ezemidlalo zaBasetyhini: Ibhola yeBhola, Umkhondo kunye nomhlaba, Izwe eliphambanayo, iGalofu, iqela lebhola, iTennis, iVolleyball, i-Softball
Ukuba uthanda i-APSU, Unako ukuthanda ezi zikolo:
Ezinye iikholeji kwiNgqungquthela yase-Ohio Valley eneenkcukacha ezifanayo zokungena kwi-APSU ziquka iYouth University State University , i- Tennessee Tech University , i- University of Jacksonville University , iYunivesithi yase- Eastern Illinois kunye neYunivesithi yaseMurray State . Ezi zikolo zonke zinika uluhlu olubanzi lweenkqubo zezemfundo, kwaye bonke banama-10 000 abadlulileyo ababhaliselwe kuzo.
Iikholeji zase Indiana
Iimpawu zeTela eziPhambili zeLizwe lokuthengisa lonke ixesha
Yintoni ebalulekileyo yeKhemistry?